गुराँस लघुवित्तको दोस्रो दिन कति पर्यो आवेदन ? — Motivatenews.Com
गुराँस लघुवित्तको दोस्रो दिन कति पर्यो आवेदन ?
काठमाडौं – गुराँस लघुवित्तले निष्काशन गरेको आईपिओमा दोस्रो दिनसम्म १२.५५ गुणा बढीको आवेदन परेको छ । कम्पनीको आईपिओमा बेलुका ५ बजेसम्म १ लाख ५४ हजार २ सय २६ आवेदकबाट २९ लाख ३४ हजार १ सय २० कित्ताको लागि आवेदन परेको बिक्रि प्रबन्धक एनआईबिएल एस क्यापिटलले जनाएको छ ।
कम्पनीले प्रति कित्ता १०० रुपैयाँका दरले दुई लाख ५० हजार कित्ता आइपीओ निष्काशन गरेको हो । जस मध्ये ३ हजार ८७५ कित्ता कर्मचारीको लागि र १२ हजार ५ सय कित्ता सामुहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ । बाँकी रहेको २ लाख ३३ हजार ६ सय २५ कित्ताको लागि सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्ने छन् ।
लगानीकर्ताले बैशाख २० गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने छन् । आईपिओमा न्युनतम १० कित्ता र बढीमा ५०० कित्ताको लागि आबेदन दिन सकिनेछ। तर लघुवित्तको आईपिओमा माग भन्दा बढीको आवेदन परिसकेको र र गोलाप्रथाबाट समान १० कित्ता शेयर बाँडफांड हुने भएकोले १० कित्ता भन्दा बढीको लागि आवेदन दिनु उपयुक्त हुने छैन ।